kitendry ipad mora | Vaovao IPhone
Tato ho ato dia mahita zavatra betsaka isika Kitendry Bluetooth ho an'ny iPads sy iPads 2 antsika, na dia misy aza manana vidiny lafo loatra amin'ny tsy fampiasana azy ireo isan'andro.
Mazava ho azy, raha zavatra izay hampiasainao isan'andro dia tsara kokoa ny mitady marika matoky toa an'i Zagg, eto dia afaka mahita famerenana momba izany ianao; fa raha mieritreritra ianao dia hampiasa azy io kely na tsotra tsy te handany vola be ianao amin'ny klavie no ahafahanao mividy ireto dealextreme amin'ny € 30 ny vidin'ny fandefasana dia ao koa.
Mifanaraka tanteraka amin'ny iPad izy ireo ary miasa toy ny fonony, misy loko maromaro azonao atao:
Aluminium + Mainty
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Kitendry Wireless ho an'ny iPad amin'ny vidiny lafo
smaagraa dia hoy izy:
Amporisihiko ilay amidy ao amin'ny The Tablet Closet ho an'ny iPad 2. Kitendry toy ny iray amin'ny sary amin'ny aliminiôna sy lakile mainty fa amin'ny Espaniola tanteraka (miaraka amin'ny Ñ, Ç sy accents).
Tena maivana sy manify izy io ary ny iPad dia miraikitra amin'ny fitendry mba hahafahan'izy ireo miaraka entina amina tranga sy kitapo. Tsy mifanaraka amin'ny iPad 1 izy io satria tsy mifanaraka tsara sy noho ny lanjany (mampihetsika ny afovoan'ny hery misintona rehefa manohana azy io), na dia ampifandraisin'ny Bluetooth sy miasa tsy miankina aza izany.
Iray volana no nampiasako azy ary mahafinaritra raha mila mitoraka bilaogy ianao ary mila manoratra lahatsoratra lava. Ary koa, manana hotkey toy ny fikarohana, trano, famirapiratana, hidin-trano izy io.
Tsidiho io amin'ny pejiny ary ho hitanao ny fomba fampiasam-bola mendrika.
Mamaly amin'ny smaagraa
Sn0wbreeze dia havaozina amin'ny kinova 2.9.1 hanamboarana bibikely
Tutorial: manangana firmware amin'ny SHSHs anao ary miarova jailbreak tsy voaroaka iOS 5.0.1 mandrakizay